Xafnium budada budada, HfB2 - Goodao Technology Co., Ltd.
oo leh barta dhalaalida sare, kuleylka kuleylka sare, u adkeysiga qiijiyeynta heerkulka sare ee waxqabadka dhameystiran ee qalabka dhoobada cusub, inta badan loo isticmaalo dhoobada heerkulka sare, xawaaraha sare ee sanka diyaaradda iyo duulista, aerospace iyo meelaha kale
Caanaha molecular B2H
Lambarka CAS 12007-23-7
Sifooyinka madow cawlan
Cufnaanta 10. 5g / cm3
Barta dhalaalida 3250 C a
Isticmaala oo leh barta dhalaalida sare, kuleylka kuleylka sare, diidmada qiiqa ee udgoon heerkulka sare ee waxqabadka buuxa ee ceramimaterials-yada cusub, oo inta badan loo isticmaalo dhoobada heerkulka aadka u sarreeya, koorta xawaaraha sare ee hawada iyo duulimaadka, aerospace iyo meelaha kale
Qaaciddada Molecular B2Hf
Miisaanka molikalku waa 200.112
Hafnium diboride (HfB2) waa muraayad madow oo cawl leh dhalaalkeeduna yahay macdan. Qaab dhismeedkeeda muraayadaha ayaa iska leh nidaamka laba geesoodka ah. Maaddaama ay tahay heerkul heer sare ah oo heer sare ah oo dhoobada ah,
HfB2 waxay leedahay barxad sare (3380 ℃), daahirnimo sare, cabbirka yar yar, qaybinta lebiska, dhul balaaran oo gaar ah, firfircoonida dusha sare, cufnaanta jumlada oo hooseysa, habdhaqanka korantada oo sare iyo astaamaha kiimikada oo deggan. Wax dhib ah kama lahanayso dhammaan reagent-yada kiimikada marka laga reebo HF heerkulka qolka. Qalabka dhoobada cusub oo leh barta dhalaalida sare, kuleylka kuleylka sare iyo u adkeysiga qiijiinta
Adeegsiga ugu muhiimsan:
Waxaa badanaa loo isticmaalaa dhoobada heerkulka sare, dhoobada sanka ee diyaaradaha xawaaraha sare, duulimaadka, aerospace iyo meelaha kale. Waa waxyaabaha ugu macquulsan ee musharraxa ee dhoobada heerkulka aadka u sarreeya. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii qalab ka soo horjeedka ka-soo-noqoshada ee deegaanka qiijiinta heerkulkiisu sarreeyo, waxayna leedahay astaamaha qallafsanaan sare, qaab-dhismeed sarreeya, is-habeyn kuleyl sare iyo habsami sare.
Hore: Nickel Boride Powder, Ni2B
Xiga: Budada Zirconium budada, ZrB2
Hafnium boride budada
Warshadaha budada loo yaqaan 'Hafnium boride'
Warshad budada loo yaqaan 'Hafnium boride'
Soo saaraha budada Hafnium
Soosaarayaasha budada ah ee Hafnium
Hafnium boride budada Qiimaha